Gamsei Mmanya Mmanya - Imewe Mmewe
Mmanya Mmanya Mgbe Gamsei mepere na 2013, a na-ewebata hyper-localism n'ọhịa nke emetụtara ihe oriri. Na Gamsei, ihe ndị na-eme ka mmanya na-egbu ma ọ bụ nke ndị ọrụ ugbo nọ n'obodo ha mepere emepe. Ime ụlọ mgbochi, bụ ihe doro anya na-aga n'ihu na nkà ihe ọmụma a. Dị nnọọ ka mmanya ndị ahụ, Buero Wagner zụtara ihe niile dị na mpaghara, ma soro ndị ọrụ obodo rụkọọ ọrụ ọnụ iji mepụta usoro esi edozi. Gamsei bu ihe nzuzu zuru oke nke na - eme ka ihe omuma nke mmanya buru ihe omuma ohuru.
Aha oru ngo : Gamsei, Aha ndị na-emepụta ya : BUERO WAGNER, Aha onye ahịa : Trink Tank.
Mmanya Mmanya BUERO WAGNER Gamsei